Ịghọta Ihe Baịbụl Kwuru
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mbunda Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
E nwere otu nwatakịrị hụrụ ka nnukwu anwụrụ ọkụ si n’elu otu ụlọ ọrụ na-akwụgo n’elu. Otú anwụrụ ọkụ ahụ si ju n’elu mere ka nwatakịrị ahụ chee na ihe ụlọ ọrụ ahụ na-emepụta bụ anwụrụ ọkụ nke na-aghọ urukpuru na-ekpuchi eluigwe. Ihe a nwatakịrị a chere nwere ike ịtọ ọchị. Ma, ọ bụrụ na mmadụ aghọtahie ihe dị ezigbo mkpa o kwesịrị ịghọta, o nwere ike ịkpatara ya nsogbu. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na mmadụ aghọtahie ihe e dere ná mkpọ̀ ọgwụ ọ na-aṅụ, o nwere ike ịkpatara ya ezigbo nsogbu.
Ọ bụrụ na mmadụ aghọtahie ihe Baịbụl kwuru, nsogbu o nwere ike ịkpata nwedịrị ike ịka njọ. Dị ka ihe atụ, ụfọdụ ndị ghọtahiere ihe Jizọs kụziiri ha. (Jọn 6:48-68) Kama ịgba mbọ ka ha ghọta ihe ọ na-ekwu, ha ekwetaghịzi ihe niile ọ kụziri. Ihe a ha mere ghọrọ ha ahịa.
Ị̀ na-agụ Baịbụl ka ị mata otú ị ga-esi na-ebi ndụ? Ọ bụrụ ihe ị na-eme, ọ dị mma. Ma, ì nwere ike ịghọtahie ihe ị gụrụ? E nweela ọtụtụ ndị ghọtahiere ihe ha gụrụ na Baịbụl. Ka anyị leba anya n’ihe atọ Baịbụl kwuru ndị mmadụ na-aghọtahiekarị.
Baịbụl kwuru ka anyị “tụọ egwu ezi Chineke.” Ụfọdụ na-aghọtahie ihe a Baịbụl kwuru. Ha chere na ọ pụtara na anyị kwesịrị iji ụjọ na-efe Chineke. (Ekliziastis 12:13) Ma, Chineke achọghị ka ndị na-efe ya jiri ụjọ na-efe ya. Ọ sịrị: “Atụla egwu, n’ihi na m nọnyeere gị. Elegharịla anya n’ụjọ, n’ihi na abụ m Chineke gị. M ga-eme ka ị dị ike. M ga-enyere gị aka.” (Aịzaya 41:10) Ihe ịtụ egwu Chineke pụtara bụ mmadụ iji obi ya niile na-akwanyere ya ùgwù.
À ga-eji ọkụ bibie ụwa?
Baịbụl kwuru na “e nwere oge a kara aka maka ihe ọ bụla, . . . oge ịmụ nwa na oge ịnwụ anwụ.” Ụfọdụ na-aghọtahie ihe a Baịbụl kwuru. Ha na-ekwu na ihe ọ pụtara bụ na Chineke ekpebiela mgbe onye ọ bụla ga-anwụ. (Ekliziastis 3:1, 2) Ma, ihe amaokwu Baịbụl a na-ekwu bụ banyere ihe ndị na-eme ná ndụ, nakwa na ọnwụ na-adabara mmadụ niile. Okwu Chineke na-emekwa ka anyị mara na ihe anyị kpebiri ime nwere ike ime ka anyị dị ogologo ndụ ma ọ bụ nwụchuo ọnwụ. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru, sị: “Egwu Jehova ga-atụkwasịrị mmadụ ọtụtụ ụbọchị.” (Ilu 10:27; Abụ Ọma 90:10; Aịzaya 55:3) Olee otú nke a nwere ike isi mee? Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na anyị na-atụ egwu Chineke, anyị ga-ezere ịṅụbiga mmanya oké na ịkwa iko n’ihi na ha na-akpatara mmadụ nsogbu.—1 Ndị Kọrịnt 6:9, 10.
Baịbụl kwuru na eluigwe na ụwa dị ugbu a ka “e debeere ọkụ.” Ụfọdụ ndị na-ekwu na ihe ọ pụtara bụ na Chineke ga-ebibi ụwa a anyị bi n’ime ya. (2 Pita 3:7) Ma Chineke kwuru na enweghị mgbe ọ ga-ebibi ụwa anyị a. Chineke “tọrọ ntọala ụwa mee ka o sie ike; ọ gaghị ama jijiji ruo mgbe ebighị ebi, ma ọ bụ ruo mgbe niile ebighị ebi.” (Abụ Ọma 104:5; Aịzaya 45:18) Ọ bụ ndị na-eme ihe ọjọọ nọ n’ụwa ka Chineke ga-ebibi kpamkpam ka à ga-asị na e ji ọkụ bibie ha. Ebe ụfọdụ e kwuru banyere eluigwe na Baịbụl, ihe ọ pụtara bụ ihu igwe, mbara igwe ebe kpakpando dị, ma ọ bụkwanụ ebe Chineke bi. Ma, o nweghị nke ọ bụla Chineke ga-ebibi.
GỊNỊ MERE NDỊ MMADỤ JI AGHỌTAHIE BAỊBỤL MGBE ỤFỌDỤ?
Ihe ndị anyị kwurula na-egosi na ọtụtụ ndị na-aghọtahiekarị ihe ha gụrụ na Baịbụl. Ma, gịnị mere Chineke ji kwe ka ụdị ihe a na-eme? Ụfọdụ nwere ike ịna-eche, sị: ‘Ọ bụrụ na Chineke ma ihe niile, ọ gaara ede Baịbụl otú ọ ga-adịrị onye ọ bula gụrụ ya mfe ịghọta. Gịnị mere na Chineke emeghị ya otú ahụ?’ Ka anyị legodị ihe atọ mere ndị mmadụ ji aghọtahie Baịbụl.
E dere Baịbụl ka ndị dị umeala n’obi ma chọọ ịmụta ihe, gụọ ma ghọta ya. Jizọs gwara Nna ya, sị: “Nna, Onyenwe eluigwe na ụwa, ana m enye gị otuto n’ihu ọha n’ihi na i zonahụwo ndị maara ihe na ndị nwere ọgụgụ isi ihe ndị a nke ọma ma kpugheere ha ụmụ ọhụrụ.” (Luk 10:21) E dere Baịbụl otú ọ ga-abụ naanị ndị dị umeala n’obi ga-aghọta ya. Ọtụtụ “ndị maara ihe na ndị nwere ọgụgụ isi” na-aghọtahie ya n’ihi na ha na-adịkarị mpako. Ma ndị na-aghọta ya bụ ndị dị umeala n’obi ka “ụmụ ọhụrụ” ma chọọ ịmụta ihe. Ihe a gosiri na Chineke ji amamihe dee Baịbụl.
E dere Baịbụl ka ndị ji obi ha niile chọọ ka Chineke nyere ha aka ịghọta ya ghọta ihe ha gụrụ. Ihe Jizọs kwuru gosiri na e kwesịrị -inyere ndị mmadụ aka ịghọta ihe ọ kụziri tupu ha aghọta ya nke ọma. Olee otú a ga-esi enyere ha aka a? Jizọs kwuru, sị: “Ihe inyeaka ahụ, bụ́ mmụọ nsọ, nke Nna m ga-ezite n’aha m, ga-akụziri unu ihe niile.” (Jọn 14:26) Ihe ọ pụtara bụ na Chineke na-enye ndị mmadụ mmụọ nsọ ya ka ha nwee ike ịghọta ihe ha gụrụ na Baịbụl. Ma, Chineke anaghị enye ndị na-achọghị ka o nyere ha aka mmụọ nsọ ya. Ọ bụ ya mere ha anaghị aghọta ihe Baịbụl kwuru. Mmụọ nsọ Chineke na-emekwa ka Ndị Kraịst ma Baịbụl nke ọma gaa nyere ndị chọrọ ịghọtakwu Baịbụl aka.—Ọrụ Ndịozi 8:26-35.
E dere ihe ụfọdụ dị na Baịbụl ka ndị mmadụ ghọta ha mgbe Chineke chọrọ ka a ghọta ha. Dị ka ihe atụ, a gwara Daniel onye amụma ka o dee ihe ga-eme n’ọdịnihu. Otu mmụọ ozi gwara ya, sị: “Ma gị onwe gị, Daniel, zochie okwu ndị a, mechiekwa akwụkwọ a, ruo n’oge ikpeazụ.” Kemgbe ọtụtụ narị afọ, ọtụtụ ndị agụọla ihe e dere n’akwụkwọ Daniel ma ha aghọtaghị ihe ha gụrụ. Nke bụ́ eziokwu bụ na Daniel aghọtadịghị ihe ụfọdụ o dere. O kwuru, sị: “Mụ onwe m nụrụ ma aghọtaghị m.” Ma, ndị mmadụ ga-emecha ghọta ihe ndị ahụ Daniel dere, ma ọ ga-abụ mgbe Chineke chọrọ ka a ghọta ha. Mmụọ ozi ahụ gwara Daniel, sị: “Gawa, Daniel, n’ihi na e zochiwo okwu ndị a, mechiekwa ya ruo n’oge ikpeazụ.” Ole ndị ga-aghọta ihe ndị ahụ? Baịbụl zara ajụjụ a. Ọ sịrị: “Ọ dịghịkwa onye ajọ omume ọ bụla ga-aghọta ihe ndị a; ma ndị nwere nghọta ga-aghọta ha.” (Daniel 12:4, 8-10) Ihe ọ pụtara bụ na Chineke anaghị eme ka a ghọta ihe ụfọdụ e dere na Baịbụl ruo mgbe ọ chọrọ ka a ghọta ha.
È nwetụla mgbe Ndịàmà Jehova ghọtahiere ihe Baịbụl kwuru n’ihi na oge Chineke chọrọ ka a ghọta ha erubeghị? Ee, e nwetụla. Ma, mgbe oge Chineke chọrọ ka a ghọta ha ruru, Ndịàmà Jehova ghọtara ha ma gbanwee otú ha sibu ghọta ha. Ndịàmà Jehova na-eṅomi ndịozi Jizọs, bụ́ ndị dị umeala n’obi. Ndịozi Jizọs gbanwere otú ha sibu ghọta ihe ndị Jizọs kụziiri ha mgbe ọ bụla Jizọs mere ka ha ghọtakwuo ha.—Ọrụ Ndịozi 1:6, 7.
Ihe ahụ nwatakịrị ahụ anyị kwuru ná mmalite isiokwu a ghọtahiere nwere ike ịbụ obere ihe. Ma, mmadụ ịghọtahie ihe Baịbụl kwuru abụghị obere ihe. Ihe ndị e dere na Baịbụl abụghị ihe mmadụ ga-achọ iji echiche nke ya ghọta n’ihi na ha dị ezigbo mkpa. N’ihi ya, gwa ndị ọzọ ka ha nyere gị aka ịghọta ihe ị na-agụ na Baịbụl. Ndị ị ga-agwa bụ ndị dị umeala n’obi na-amụ Baịbụl, ndị Chineke ji mmụọ nsọ ya na-enyere aka ịghọta Baịbụl, nakwa ndị kwetasiri ike na oge anyị a bụ oge Chineke chọrọ ka anyị ghọta Baịbụl karịa mgbe ọ bụla ọzọ. Biko, gwa Ndịàmà Jehova ka ha nyere gị aka, ma ọ bụkwanụ gị agaa ebe ha na-edebe ihe n’Ịntanet bụ́ jw.org/ig gụọ ihe ndị ha mere ezigbo nchọnchọ dee. Baịbụl kwuru, sị: “Ọ bụrụkwa na ọ bụ nghọta ka ị na-akpọku . . . , ọ bụkwa ihe ọmụma Chineke ka ị ga-achọta.”—Ilu 2:3-5.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Mmadụ Ịghọtahie Ihe Baịbụl Kwuru, Ọ̀ Bụ Obere Ihe?